10 Cabitaan Oo Gabowga Ka Hortaga Caafimaadka Iyo Quruxdana Ilaaliya - Daryeel Magazine
10 Cabitaan Oo Gabowga Ka Hortaga Caafimaadka Iyo Quruxdana Ilaaliya
Saynisyahano ka kala socday wadamo kala duwan ayaa soo saaray liis ka kooban toddoba cabitaan oo ay sheegeen inay yihiin kuwo ilaalin kara dhalinyara nimada qofka, quruxda iyo caafimaadkiisa oo ay wanaajinayaan, kuwaas oo ah waxyaalo ay awoodaan dadku inay cabaan.
Toddobadan cabitaan oo ay soo saareen khubaro ka kala socday wadmaada Ruushka,Japan,Maraykanka iyo Wadamada Yurub ayaa kala ahaa:
1 Shaahada cagaaran (green tea): waxa laga helaa shaahan intiisa badan wadanka Chine,inkasta oo wadamada kale badankooda loo dhoofiyo shaahaasi,waana mid faa’iidooyin badan u leh dadka siday khubaradani sheegeen.
2 Roselle: waa shay sida shaaha oo kale oo isticmaalo,waana mid inta badan isku jir ah ,kana kooban maadooyin kala duwan,waa shay inta badan laga helo qaaradda Afrika,waxaana hore u isticmaali jiray dadkii Faraacida ahaa,waxaanay aaminsan yihiin khubaro badani inuu daweeyo xanuuno badan.
3 Coffee: waxa uu inta badan caawiyaa in ay sii socoto waxyaalaha uu jidhku qabanaayo,waxaanu ka shaqaysiiyaa wadnaha iyo xididada dhiiga qaada ama uu maro .
4 Cocoa: waa mid isku jir ah waxaana laga sameeya geedka shukulaatada, waxaanu ka hortagaa in dhiigu noqdo mid xinjirooba oo fadhiista, sidoo kalena waxa uu ka hortagaa xanuunka Cancer, Faaliga iyo macaanka.
5 Tamaandhada/yaanyada Sharaabka Laga Sameeyo: waxa uu faa’iidooyin u lee yahay dhinaca araga oo uu dhibaatooyinka arraga dadka kaga yimaada ka hortago, waxa kale oo uu u fiican yahay dadka xanuunka Cancer ka qaba.
6 Boiled Wild rose: waa sharaab inta badan laga sameeyo midhaha ubaxa, gaar ahaana ubaxyo gaar aha oo caan ku ah samaynta sharaabyada,waana mid isku jir ah,inkasta oo uu u badan yahay Vitamin C,waxa loo isticmaali jiray dawo ahaan laga soo bilaabo qarnigii 18-naad.
7 Caanaha: Caanuhu murqaha ayay dhisaan wayna xoojiyaan, caanaha waxaa laga helaa borotiinka loo yaqaan “Whey”.
8 Biyaha: biyuhu waxay wanaajiyaan caafimaadka wadnaha iyo maskaxda, waxay qooyaan oo ay jilciyaan maqaarka jidhka, sidoo kale biyuhu waxay jidhka ka saaraan wasakhda iyo sunta.
9 Liinta macaan: vitamin C-ga ku jira liin-macaanta amma walxaha kale ee antioxidans ah waxay maqaarka ka ilaaliyaan in dhaawaca soo gaadha han-baabuqo amma in maqaarka ay dhaw soo gaadhsiiyaan sunta degaannada ka jirta ee dikhawga hawadu sababto, gaar ahaan kuwa keena in maqaarku is laalaabo amma coodh-coodho. Liin-macaanta oo afka laga qaataa waxay yaraysaa dhaawaca maqaarka soo gaadha ee keena laalaabka amma finanka tirade badan ee qofka maqaarkiisa ka soo baxa, waxaanay dhiigga ka saarta sunta cuntooyinka qaar sababaan
10 Cinabka: Cinabka cas cas, waa marka uu noqdo midhaha cinabku kuwo si fiican u bislaaday,waxa laga sameeyaa sharaabyo kala duwan ,iyada oo sidoodana loo cuno, haddii la cuno maalintii malqaacad midhahaas ah ama koob sharaabkiisa ah la cabona waxay keentaa awood jidhka ah oo qofku helo, sidoo kale wuxuu xoogeeyaa difaaca jidhka.
10 Jimicsi Oo Qofka Sameeya Wejigiisa Ka Ilaaliya Coodhcoodhka Iyo Calaamadaha Gabowga FAYTAMIIN C: Muhiimadda Uu U Leeyahay Wadnaha Iyo Caafimaadka Qofka Cuntooyinka Kobciya Aragga Iyo Caafimaadka Indhaha Cabitaan Korka Dhalaaliya, Caafimaadka Lafahana Xoojiya